Fanafainganana ny fantsom-pivoaranao amin'ny taranaka mitarika mandeha ho azy | Martech Zone
Fanafainganana ny fantsom-pivoaranao amin'ny Generation Lead automated
Talata, Febroary 16, 2016 Douglas Karr
Vitsy ny orinasa manana ny herin'ny varotra hiantsoana ny vina rehetra azo atao. Midika izany fa matetika avela ho azy fotsiny na fahatsapana ao anaty vavony izay fanantenana tokony handanianao fotoana be indrindra. Matetika kokoa noho izany dia miteraka loza ho an'ireo orinasa izany. Mandany fotoana amin'ny prospect izay tsy hiova mihitsy izy ireo raha toa ka mety manana lead izay mafana sy vonona hanao raharaham-barotra.
Taranaka mitarika mandeha ho azy Ireo sehatra dia manolotra fomba hafa izay itodihana any ho any ny fitarihana ary matetika dia omena ny tanjon'izy ireo hanidy. Miaraka amin'ny tahiry madio sy ny firmagraphics mifanentana aminy, ny database dia azo ovaina ho dingana iray izay manampy ny ekipa mpivarotra sy ny varotrao hanaiky ny paikady miasa - manomboka amin'ny foto-kevitry ny fampielezan-kevitra ka hatrany amin'ny fanatsarana.
mampiditra namokatra an'ity sary ity mba hanehoana làlana roa misy amin'ny mpivarotra raha ny paikadim-piainan'izy ireo sy ny famokarana mpanjifa:
Sakan-dalana mahazatra misy amin'ny fizotran'ny fitarihan-tanana. Miteraka tsy fahombiazana maro izy ireo ary tsy fahaizana mandrefy ny fiverenan'ny fampiasam-bola amin'ny marketing. 50% hatramin'ny 65% ​​ny varotra no very raha misy mpifaninana mamaly alohan'ny ataonao mba hitarika anao
Taranaka mitarika mahomby manafaingana ny fantsom-pivarotana amin'ny alàlan'ny fomba fitarihana fitarihana mandeha ho azy izay azo ampiharina amin'ny dingana rehetra amin'ny varotra: ny drafitra, ny fandefasana, ny fanatanterahana, ny famakafakana ary ny fanatsarana - mampitombo ny fiverenan'ny fampiasam-bola ary mamorona mpanjifa sambatra. Ireo orinasa manamboatra ny fitantanana fitarihany dia mahita fiakarana 10% amin'ny vola miditra ao anatin'ny 6-9 volana
Tags: taranaka mitarika mandeha ho azySary torohaymampiditramitarika mandeha ho azyLeadsFanamafisana ny varotra
Scout: Serivisy handefasana carte postales isaky ny $ 1
Sarimihetsika Marketing Kenshoo Paid Digital: Q4 2015